MW Waare: Farmaajo firimbi dagaal qabiil ayuu iclaamiyay | KEYDMEDIA ENGLISH
Madaxweyne Waare, ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu ku duulay beel Soomaaliyeed oo deggan Hiiraan isla-markaana uu u tafa-xeytay inuu dagaallo sokeeye dib ugu celiyo dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihihii hore ee Maamulka Hirshabeelle, Maxamed Cabdi Waare, ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay, hadalka MW ku xigeynka maamulkaas iyo taliyaha ciidanka xoogga ee ku aaddan in ciidanka lageeyay Baladweyne kaliya la dagaallamayan Al-Shabaab.
Wuxuu sheegay in siyaasadda Farmajo aysan meelna uga jirin waxa la yiraahdo, “la dagaallanka Al-Shabaab” ee kaliya ay dirir kala dhaxeyso maamullada, degaannada iyo shaqsiyaaska ay siyaasadda isku hayaan ee ka aragtida duwan.
“Haddii Al-Shabaab lala dagaallamayo shanti sano ee la soo dhaafay ayaa lala dagaallami lahaa, iyadoo Al-Shabaab Suuqii Bakaaraha u xiran yahay ayaa Baladweyne laga baadi goobay, caqligaa diiday”. Ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, Waare.
Wuxuu xusay in Farmaajo, go’aansaday inuu Maamulladda burburiyo ama dadlka Al-Shabaab u gacan galiyo, isagoo la dagaallamaya dowlada gobolleedyada iyo ururrda la dagaallama kooxda xiriirka la leh A-qaacida.
“Siyaasadda Farmaajo, waxa ay ku dhisan tahay in isaga iyo Al-Shabaab wada noolaadaan, waa la soo dhaafay oo waxaa la gaaray Al-Shabaab cadowgiisii in Farmaajo la diriro, sida; Ahlu-sunna, Jubbaland AMISOM iyo cid kasta oo ka soo hor jeedda kooxdaas”. Ayuu yiri.
Wuxuu sheegay in Farmaajo uu Biixi masuul uga dhigay hirgalinta qorshiyiisa Hiiraan, halka Biixi qudhiisu uu sarkaal uu adeer u yahay u dhiibay galka Baladweyne, taas oo ka dhigan in Madaxweynihii hore uu duullaan qabiil ku qaaday xarunta gobolka.
MW Waare, wuxuu xaqiijiyay in guud ahaan taliyayaasha hoggaaminaya ciidanka lagu daad gureeyay Baladweyne ay ku heyb yihiin Farmaajo, taas oo micnaheedu yahay in Farmaajo ka baxay heykalkii dowladnimo una guuray aano-doon iyo aarsi qabiil.
Wax caadiya iyo dhaqan la yaqaan oo soo jireen ah ayuu ku tilmaamay in Kaligi-talisku, marka uu ogaado in la nacay uu salka la galo jufadiisa hoose, wuxuuna tusaale u soo qaatay wuxii uu sameeyay Ina Siyaad Barre, oo 30 sano ka hor dalka galiyay dagaallo sokeeye.
“Farmaajo firimbi dagaal qabiil ayuu iclaamiyay, war nikaas ciddii qabashadiisa lahow qabta, oo Farmaajo qabsoomi maayo waan ogahaye Biixi wixii qabashadiisa lahow qabta, war wiilka yar ee Baladweyne loo diray qofkii qabashadiisa lahow qabo, war waa is naqaan, dagaal qabiil ku kala faa’iidi meyno ee ha la is ceshto.” Ayuu yiri Waare.
Dowladda Turkiga ayuu ugu baaqay in ay dib u eegis ku sameyso ciidamada ay tababarto ee Gorgor iyo Haramcad, kuwaas oo maalin kasta Farmaajo u adeegsanayo gabood-fallada, halka uu Ra’iisul Wasaaraha ku boorriyay in uu tallaabo rasmi ah ka qaado saraakiisha ciidanka u daabulay Baladweyene.
Madaxweynaha Hishabeelle, Cali Guudlaawe, ayuu sidoo kale, kula taliyay inuu ka feejignaayo dhagarta laga maleegayo Villa Soomaaliya ee la doonayo in la isku sii seejiyo isaga iyo dadka reer Hiiraan, wuxuuna ugu baaqay inuu isaga dhex baxao Farmaajo iyo dadka uu duullaanka ku qaaday ee reer Baladweyne.